Breast Cancer (2) ရင်သားကင်ဆာ (၂) - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
“ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထာင်” ဆိုတာက ဆိုရိုးစကား။ “ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်” ဆိုတာက ဖဆပလ ခေတ်မှာ ရေပမ်းစာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအသုံး။ သီချင်းစပ်ရင် “မန်ကျီးကိုးပင်”၊ “သဲကိုးဖျာ”၊ များတာတွေကို စာဖွဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ပြောစရာတွေ များသလားမမေးနဲ့။ သိတာလေးသာ ရွေးပြောပါမယ်။ အမှန်က “ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်း” မှာပါ။ တင်စားချက်ကို ရေးသာရေးရတယ်၊ ခုခေတ်မှာ မြန်မာစာကအစ ပြောစရာဖြစ်နေလို့ “ဒီဆရာဝန် ညောင်းလို့ ထောင်းတယ်” လို့ ထင်နေကြမလား မပြောတတ်ပါ။
တူမတယောက်ဆီက သတင်းရတယ်။ သူ့မှာ “ရင်သားကင်ဆာ အဆင့် (၂)” တဲ့။ ဝတ္တရားလဲရှိ၊ ဆွေမျိုးတွေ မတွေ့ရတာကလည်း ကြာလှပြီ၊ တူမရဲ့ အမေ၊ သူ့အဒေါ် နှစ်ယောက်ကလဲ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ဆုံးပါးသွားကြပြီးပြီ၊ (အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီ) အသားမြက်နှစ်ဖက် ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဆိုတော့ “ဒီကိုသာ လာကုလှည့်” လို့ ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
သူ့ဖါသူ ရင်သားမှာ အကျိတ်စမ်းတာနဲ့ ချက်ချင်း ဆိုသလို ဒေါက်တာ (့) ဦးစီးပြီးဖွင့်ထားတဲ့ (့) ပုဂ္ဂလိကဆေးတိုက်ကို သွားပြပါတယ်။ ဆရာဝန်ကလဲ ချက်ချင်းပါဘဲ နောက်ရက်မှာ ရင်သားကအကျိတ်ကို ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ခွဲထားတာကို (ဘိုင်အော့ပ်စီ) လုပ်ဘို့ ဓါတ်ခွဲခန်းကို ကိုယ်တိုင်ပို့၊ အဖြေကို ကိုယ်တိုင် ရွေးစေပါတယ်။ ခွဲအပြီး ၄ ရက်မှာ အဖြေစာရွက် ယူပြီး တခေါက် ထပ်ပြတော့ “နို့ပြွန်ကင်ဆာ အဆင့် ၂” တဲ့။ နောက်ရက်လာခဲ့ ရင်သားတဖက်လုံးကို ထုတ်ပြစ်ရမယ်။ မြန်မြန်လုပ်ပေးတဲ့ ဆရာဝန်ကို ကျေးဇူးတင်ရမလိုပါဘဲ။
အဲဒီညမှာ ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရပါတယ်။ မလာခင် ဆေးစစ်ချက်တွေကို (စကင်) လုပ်ပို့ခိုင်းတော့ Infiltrative ductal Carcinoma (B-R Histologic grade II), breast left လို့ဖတ်ရပါတယ်။ “ဝဲဘက်ရင်သားမှာ တိုးပွါးနေတဲ့ နို့ပြွန်ကင်ဆာ (အနုစိတ်ကြည့်ခြင်း အဆင့် ၂)” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ သေချာပြီ၊ ကင်ဆာဘဲ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ လာသာလာခဲ့။ ဒို့ မျက်စိအောက်မှာတင် ဒုက္ခသည်တယောက် ရင်သားကင်ဆာ ဒေလီမှာကုတာ ကောင်းနေပြီ။ အခုဆို အမေရိကားကို အခြေချနေဘို့ သားအမိနှစ်ယောက်လုံး ရောက်သွားကြပြီ။
အဲဒီ အမျိုးသမီးဆိုရင် (တီဘီ) ရှိလို့ကုရ၊ ဆီးချိုရှိလို့လဲကုရနဲ့။ ချီးကျူးဘို့ကောင်းတာက သူ့စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာမှုနဲ့ သူပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေကနေ ဝိုင်းကြဝန်းကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဒေလီရဲ့ ပူပျင်းလွန်းလှတဲ့ နွေလည်ခေါင်မှာ တနာရီကားစီးရတဲ့ အကွာမှာရှိတဲ့ အစိုးရဆေးရုံကြီးရှိရာကို အခေါက်ခေါက်အခါခါသွားရတယ်။ ရောက်ပြန်တော့ လူတန်းရှည်ကြီးမှာ ဝင်ပြီးတန်းစီရတယ်။ ဒေလီကို လာသူသူတိုင်းကို စိတ်ရှည်ဘို့၊ သည်းခံဘို့၊ အောင့်အီးတတ်ဘို့ ဆိုတဲ့ “ဒူးစ်-အင်-ဒုန့်စ်” လမ်းညွှန်ချက်ဟာ ထုံးစံပါ။
ဆေးရုံ ကြိုတင်ရွေးရပါတယ်။ All India Institute Of Medical Sciences (AIIMS) ဆိုတာက အစိုးရဆေးရုံလဲဖြစ်၊ အကြီးဆုံးဆေးရုံလဲဖြစ်တယ်။ Safdarjung Hospital အစိုးရဆေးရုံမှာ ပြောခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ရင်သားကင်ဆာကို ကုခဲ့တာပါ။ Deen Dayal Upadhyay Hospital (DDU) ဆိုတာ မြန်မာဒုက္ခသည်မှန်သမျှ မသိမရှိကြပါ။ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးလဲ ဒီလိုဆေးရုံသွားမှ ဘောင်ဝင်သတဲ့။ Mata Chanan Devi Hospital ဆေးရုံကိုလဲ အလတ်စားအဆင့် သင့်တော်တဲ့ဆေးရုံဖြစ်ပြီး အနီးအနားမှာရှိလို့ မြန်မာတွေအဖို့ အားကိုးကြရပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကနေ အသဲအစားထိုး၊ ကျောက်ကပ်အစားထိုး စတဲ့ရောဂါသည်တိုင်း အများဆုံး လာကုကြလေ့ရှိတဲ့ ဆေးရုံတွေကတော့ ပုဂ္ဂလိက အကောင်းစားဆေးရုံတွေဖြစ်တဲ့ Apollo hospital ဆေးရုံ၊ Sir Ganga Ram Hospital ဆေးရုံ၊ Medanta Medicity Gurgaon ဆေးရုံ စတာတွေကတော့ ဖိုက်စတားတွေ ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဈေးကြီးပါတယ်။ ဆေးကုတဲ့အလုပ်ဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာ အတော်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ဒေလီမှာ ရှိကြတဲ့ အေးဂျင့်ဆိုသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ကြရတယ်။ အေးဂျင့် ဆိုတာတွေက ဗုဒ္ဓဂါယာကို ဘုရားဖူးလာကြရသလိုဘဲ အဆင်ပြေတဲ့အခါပြေ မပြေကြတာကများတယ်။ “ဘုရားဖူးပို့တာ၊ ဆေးကုဘို့ ကူညီတာတိုင်း ကုသိုလ်လဲရ ဝမ်းလဲဝလို့ မပြောနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။” ဆေးကုလာသူများရဲ့ ဒုက္ခအကြောင်း စာတပုဒ် ရေးမလားလို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ တိုင်းတပါးကို ဆေးကုလာသူများအတွက် အကျိုးဆောင်ဘို့ရာ သီတဂူဆရာတော်လို၊ ဦးကျော်သူလို လုပ်ပေးနိုင်သူများရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့ အခါခါစဉ်းစားနေမိပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာ ဆက်ရေးပါမယ်။ ကင်ဆာဆေးရုံတွေကို သပ်သပ်ရှာတော့ Rajiv Gandhi Cancer Institute & Research Centre ကိုလဲ ထည့်စဉ်းစားပါတယ်။ မြန်မာဒုက္ခသည် အမျိုးသားတဦး လည်ချောင်းကင်ဆာ ကုသဘူးတယ်။ အခုဆိုရင် တတိယနိုင်ငံ ရောက်နေပြီး၊ ရေဒီယိုကနေ သူ့အသံ (နဲနဲသြနေတာ) ကို မကြာမကြာ ကြားနေရပါတယ်။ အဲဒီကို သွားရတာလဲ မဝေးဘူး။ အစိုးရတပိုင်း၊ ပုဂ္ဂလိကတပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ဈေးလဲ မများလှပါ။ အဆင့်လဲ မြင့်ပါတယ်။
“ဘယ်အရာမဆို ကံတရား အားကိုပါ” လို့ သိပ္ပံနည်းကျ ဆေးပညာသင်ထားရသူ ကျွန်တော်က အမြဲအကြံပြုလေ့ရှိတာကို ကျန်းမာရေး မေးဘူးသူတွေ သိကြမှာပါ။ ဆေးကုလာတဲ့ တူမကို (ရာဂျစ်ဂန္ဒီ) ကင်ဆာဆေးရုံကို ခေါ်သွားဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး အိန္ဒိယကိုဆေးလာကုဘို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ၊ ဒီဆေးရုံရွေးဖြစ်သွားတာ ဆိုတဲ့နှစ်ချက်ဟာ သူမရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ သူမရဲ့ နောက်ထပ်အသက်ရှင်နေရမဲ့ကာလတွေကို ပြဋ္ဌာန်းပါတော့မယ်။
ရင်သားကင်ဆာဆိုရင် (၁) ကင်ဆာ ဟုတ်-မဟုတ်နဲ့၊ ဟုတ်နေရင် ဘယ်အဆင့်ရှိပြီ၊ ဘယ်ကိုပြန့်နေပြီ စတာတွေကို အရင်ဆုံး စစ်ဆေးရပါတယ်။ (၂) စစ်ဆေးမှုအဖြေတွေကို စုပေါင်းပြီး ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ဆေးကုမလဲ ဆိုတာကို (ကင်ဆာ ခွဲစိတ်အထူးကု + ဓါတ်ရောင်ခြည်အထူးကု + ကင်ဆာသမားတော်) တွေကနေ အတူထိုင် တိုင်ပင်ပြီးနောက်မှာ (၃) ဆရာဝန် + လူနာ၊ လူနာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးရပါတယ်။
ဆေးရုံမှာ မှတ်ပုံတင်လို့ရအောင် ကြိုးစာမှုတွေ အပူတပြင်းလုပ်ပြီးတာနဲ့ ဆေးစစ်မှုတွေ စလုပ်ပါတော့တယ်။ သွေးစစ်တယ်။ Memogram (မင်မိုဂရမ်) ရိုက်တယ်။ Biopsy အသားစထုတ်ယူပြီး အနုကြည့်မှန်ဘီလူးနဲ့စစ်ဆေးတာ လုပ်တယ်။ ECG နှလုံးစက်ရိုက်တယ်။ Chest X-ray ရင်ပတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်တယ်။ Abdomen Ultrasound ဝမ်းဗိုက် (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်တယ်။
Memogram (မင်မိုဂရမ်) ရိုက်တဲ့အခါ ဆရာဝန်က လူနာနောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို ထွက်မေးလာပါတယ်။ မြန်မာပြည် (့) မြို့မှာ ခွဲထုတ်ထားတာ၊ ငယ်ငယ်တုံးက ရိုးရိုး ရင်သားအကျိတ် ခွဲထုတ်ဘူးတာကိုလဲ ပြောပြပါတယ်။ ဆရာဝန်က နုတ်ကနေပြောပါတယ် “ကင်ဆာ မတွေ့ဘူး” တဲ့။ နားရွက်မခတ်ရဲပါ။ စာရွက်နဲ့အဖြေလဲမရသေး။ ကျန်တဲ့အဖြေတွေလဲ မရသေးပါ။ ဒါနဲ့ Biopsy အသားစထုတ်ယူတာကို သွားတော့ ဘာမှ မတွေ့ပြန်ဘူးတဲ့။ မြန်မာပြည်မှာ ပြောထားတာက ကင်ဆာ အဆင့် (၂) ဆိုတာမို့၊ (ဘိုင်အော့ပ်စီ) ကို နှစ်ခါပြန် စစ်ပါတော့တယ်။ အဖြေယူဘို့သွားပြန်တော့ အရင် ဆရာဝန်ထက် အဆင့်မြင့်သူဆရာဝန်ကနေ ကိုယ်တိုင် ထပ်လုပ်ပြန်ပါတယ်။
အားလုံးအဖြေတွေ ရလာပါပြီ -
• Blood tests သွေးစစ်ချက်များ = လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း၊ ဆီးချို၊ Anti HCV (စီ) ပိုး၊ HBsAg (ဘီ) ပိုး၊ HIV အားလုံးကောင်းပါသည်။
• Chext X-ray ရင်ပတ်ဓါတ်မှန် = ပုံမှန်။
• USG Whole abdomen ဗိုက်တခုလုံး (အာလ်ထွာဆောင်း) = ကင်ဆာကနေပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာ တစုံတရာ မရှိပါ။
• Mammography BI-RADS (Breast Imaging-Reporting and Data System) =0ရင်သားပုံဖေါ်ခြင်း အစီရင်ခံချက် ဒေတာ စနစ် = သုည။ Bilateral dense breasts ရင်သားနှစ်ဖက် တင်းခဲမှုရှိနေသည်။ Suggest: USG Breast Correlation အကြံပြုချက် = ရင်သားကို (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်ခြင်းနဲ့ တွဲဖတ်ပါ။
• FNAC (Fine needle aspiration cytology) from left breast, Opinion = No Atypical/Malignant cell seen. Features are suggestive of Inflammatory/Reparative lesion. အပ်သေးဖြင့် စုပ်ယူပြီး ဆဲလ်များကို လေ့လာခြင်း = မူမမှန်သော/ကင်ဆာဆဲလ်များ မတွေ့ရှိ။ သွင်ပြင်များသည် ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်၊ ပြန်လည် အနာကျက်ဖြစ်စဉ် အနာဖြစ်သည်။
“မြန်မာပြည်မှာ အဆင့် ၂ ရောက်နေသူကို ဒေလီမှာ ဆေးစစ်တော့ ကင်ဆာ ရှာမတွေ့ပါ။ ဘယ်မှာ မှားနေပါသလဲ။”
ရင်သားတင်းခဲမှုဆိုတာ ခွဲထုတ်တာက ၁ ခါ၊ (ဘိုင်အော့ပ်စီ) ၃ ခါ လုပ်ထားရလို့ ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုးသေဆေး၊ အနာ-အရောင်ကျဆေး၊ ၄ မျိုး ၅ ရက်သောက်စေပါတယ်။ “ခုချိန်မှာသာ ဒီလူနာ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင် ရင်သားတဖက်ကိုလဲ ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်ပြီးပြီ၊ ဓါတ်ကင်ဘို့ရာ တန်းစီဇယားရှည်ထဲမှာ စာရင်းသွင်းထားရလောက်ပြီလို့ မှန်းဆကြည့်မိပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ရေးရာတော့ မှန်းသာကြည့်ကြပေတော့။”
“စောစောသိလေ ကောင်းလေ” ဆိုတာ ရင်သား-ကင်ဆာမှာ သိပ်မှန်တယ်။ (မင်မိုဂရမ်) ရိုက်တာနဲ့ လက်နဲ့ စမ်းမတွေ့ခင် ကတည်းကနေ သိတယ်။ American Cancer Society ကနေ အသက် ၄ဝ ကျော်သူတိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ အုပ်စုမှာပါနေရင် တနှစ်တခါ၊ ၅ဝ-၇၄ နှစ်ရှိသူတိုင်း ၂ နှစ်တခါစစ်ဘို့ ပြောထားတယ်။ သိရသလောက် မြန်မာပြည်မှာ Mammogram (မင်မိုဂရမ်) စက် မရှိသေးပါ။ တရုပ်ပြည်လုပ်စက်တွေက ဒေါ်လာ ၁ ထောင်ကနေ ၂ သိန်းအထိရှိပါတယ်။ ခရိုနီတွေ လှူရင်လဲ သာဓုသုံးကြိမ်တိတိ ခေါ်ပါမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍက ချို့ယွင်းနေတာတွေရေးရတာ အလွန်တရာ စိတ်မကောင်းပါ။ ဘယ်ဆရာဝန်၊ ဘယ်ဆေးခန်းလို့ နာမည်တပ်ပြီး ထောက်ပြယုံနဲ့ တစုံလုံးကို ပြင်ဘို့မှာ အထောက်အကူပြုမယ်မထင်ပါ။ အမှားဆိုတာ လူ့အမှား၊ ပစ္စည်းကရိယာအမှား၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအမှား အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ကံတရားကလဲ ပြေးမလွတ်ပါ။
ကျွန်တော့်အလုပ်က အပြစ်ရှာရေး မဟုတ်ပါ။ ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေးသာ လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဘာတွေပြင်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ၊ ငါ ဘာကူနိုင်သလဲ။ ပေါင်နာချင်နာပါစေ ထောင်းနေပါမယ်ခင်ဗျား။
ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးရတဲ့ မင်မိုဂရမ် ကို လှူနိုင်ရင်လှူဘို့ စုံစမ်းသူတွေရှိတယ်။
1. Digital mammography machine with CE certificate, FOB Price: US $10,000-200,000 / Unit
2. MA9800 Mammography machine, FOB Price: US $1-100,000 / Set
3. Mammography machine with CE/FDA Certificate, FOB Price: US $20,000-40,000 / Unit
4. High Frequency Mammography Machine MD-M002, FOB Price: US $5,000-20,000 / Set
5. MO30 Mammography x-ray machine, FOB Price: US $1,000-3,000 / Set